iPad | My Burmese Blog
Posts in Category: iPad	Review on iPad Camera Connection Kit
Ornagai iPhone Dictionary App Give Away!!
On August 2, 2010	by Htoo Tay Zar	With	53 Comments	- iPad, iPhone	Ornagai ဆိုတာ English – Myanmar Dictionary တစ်ခုပါ။ အဲဒီ Ornagai ကို အရင်လို Web ပေါ်မှာတင်မဟုတ်ပဲ အခု iPhone App အနေနဲ့ပါ App Store မှာ ရနေပါပြီ။ ဒီ iPhone App က ကိုစေတန်ဂေါ့ develop လုပ်ထားတာပါ။ Apple App Store မှာ 0.99$ နဲ့ ရောင်းပါတယ်။ ဖုန်းထဲမှာ English Myanmar Dictionary တစ်ခုအနေနဲ့ ထည့်လို့ရပါပြီ။ Ornagai App ထဲမှာ မြန်မာစာလဲ ပေါ်ပါမယ် jailbreak လုပ်စရာမလိုပါဘူး။ iPad ပေါ်မှာလဲ ကောင်းကောင်း အလုပ်လုပ်ပါတယ်။
App, Burma, iPhone	Continue Reading
All About iPhone OS 4.0 Features
On May 23, 2010	by Htoo Tay Zar	With	3 Comments	- Apple, iPad, iPhone	ဒီနေ့တော့ weekend မို့ အိပ်ရေး၀၀ အိပ်ရလို့ iPhone OS 4.0 အကြောင်းရေးဖြစ်ပါတယ်။ iPhone OS 4.0 အကြောင်းကို Apple က ပြီးခဲ့တဲ့ April 8 ရက်နေ့က Sneak Peak Event တစ်ခုလုပ်ပြီး features အသစ်တွေပြသွားပါတယ်။ အဲဒီထဲက သိသလောက် အကြောင်းပြောကြတာပေါ့။ အမှန်တော့ Apple ဖုန်းက လူတွေ mobile ဆီကို အချိန်ကိုက်ရောက်လာခဲ့ပြီး stable ဖြစ်တဲ့ platform မို့ လူသုံးများပါတယ်။ iPhone + iPod touch အရေအတွက်က 85 Million ရောင်းခဲ့ပြီးပြီလို့ ဆိုပါတယ်။ လက်ရှိအချိန်မှာ iPhone OS run နေတဲ့ devices ၃ ခုရှိပါတယ် iPhone, iPod Touch နဲ့ အခု အသစ်ထွက်ထားတဲ့ iPad ပါ။
Apple, iPad, iPhone	Continue Reading
Tonight iPhone OS 4.0 Features To Unveil Officially!!
On April 8, 2010	by Htoo Tay Zar	With	6 Comments	- Apple, iPad, iPhone	ဒီနေ့ 8 ရက်နေ့မှာ Apple ကနေ iPhone OS 4.0 features တွေကို စပြီး developer တွေနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါတော့မယ်။ iPhone OS မှာ အခုဆိုရင် device ၃ ခု run နေတာရှိပါတယ်။ iPhone, iPod Touch အပြင် အသစ်ထွက်ထားတဲ့ iPad ရှိပါမယ်။ လက်ရှိ OS က 3.1.3 က နောက်ဆုံးပါပဲ။ လက်ရှိမှာ features တွေထဲမှာ မိုက်တာတွေက Mobile Me user တွေဆိုရင် iPhone, iPad ပျောက်သွားတာနဲ့ အွန်လိုင်းကနေ ဘယ်နေရာမှာ ကိုယ့်စက် ရှိနေလဲ ကြည့်လုို့ရတယ်။ Data တွေကို remote ကနေ အကုန်ဖျက်ပစ်လို့ရတယ်။ နောက် In App Purchase လဲရှိတော့ application ထဲမှာတင်ကိုပဲ ဈေးရောင်းလို့ရတယ်။
iPad, iPhone	Continue Reading
Myanmar Font for iPad, iPhone, iPod Touch
On April 3, 2010	by Htoo Tay Zar	With	54 Comments	- Apple, iPad, iPhone	Apple, iPad, iPhone	Continue Reading